Wax ka ogow Halkay martay Deeqo Raashin ahaa Jabuutina ku taakulaysay dadka reer Salal ee Abaarta iyo Dulmigu Naafeeyey. – Xeernews24
Wax ka ogow Halkay martay Deeqo Raashin ahaa Jabuutina ku taakulaysay dadka reer Salal ee Abaarta iyo Dulmigu Naafeeyey.
6. September 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasiir shucayb roodhile,wuxuu leexsaday raashinkii ay dawladda djibouti ugu talogashay dadkii ay abaaruhu saamaynta ku yeesheen ee s/land! kana furtay wershad
Wasiirka wershadaha somaliland shucayb maxamed muuse ayaa tagrifalay deeq raashin ah oo dawladda djibouti ugu talo gashay dadkii ay abaaruhu halakeeyeen ee gobolada somaliland ku noolaa.gargaarkan ay dawlada jabuuti ku deeqday ayaa ahaa mid ay leexsadeen xubno wasiiro ah oo xukuumadda ka tirsan,ayna ugu horayso wasiirka maaliyadda samsam cabdi aadan oo mucaawimadaas qaybtii ugu badnayd ku wareejisay wasiir shucayb oo ay isku beel yihiin wasiirka maaliyadda.
Wasiir shucayb roodhile ayaa store ku xeraystay deeqdaas badankeedii kuna maalgeliyey wershadiisa rootiga soo saarta ee xaafadda jigjiga yar ku taal,halkaas oo lagu arkayey daqiiq badan oo lagu daabulayo xaruntiisa roodhida ee hillaac,oo ah tii mucaawimada ahayd ee lagu talo galay dadka tabaalaysan ee abaaruhu saamaynta xooggan ku yeesheen ayna ka baxeen wixii ay duunyo lahaayeen.waxaana xusid mudan in wasiir maxamuud xaashi iyo shucayb roodhile uu dhexmaray khilaaf xooggan ka dib markii wasiir xaashi weydiiyey wasiirka maaliyadda samsam cabdi aadan in ay deeqdaas ku wareejiso guddiga abaaraha balse shucayb roodhile oo dhufays ugu jiray qaadashada iyo boobka raashinkaas ayaa wasiir maxamuud xaashi ugu falceliyey erayo gurracan oo ay ka mid ahaayeen”inantayada maxaad weydiinaysaa”waxaanad halkaas ka dareemaysaa damiir xumada wasiirkan iyo damqasho la’aanta ka haysa shacabka somaliland.
waa arrin aanu damiirka fayoobi qaadan karin oo aan ahayn anshax ka suurogeli kara qof masuul ah,waxaanay dhabarjab ku tahay milgo iyo haybada madaxda qaranka.
Wershad roodhida samaysa ayuu ka yagleelay hantidii ummadda wax loogu qaban lahaa,waxaana masuul uga ah nin ay walaalo yihiin .
Balse waxay isweydiintu tahay deeqdan dawlada jabuuti,ma waxay ugu talo gashay shucayb roodhile mise dadkii abaaruhu haleeleen?
Waa in wasiir samsam si cad bulshada ugu soo bandhigto deeqdaas in ay ku wareejisay shucayb roodhile ayna muujisaa,in wasiirku yahay cidda kaliya ee abaartu ku dhufatay una baahnaa gargaarka iyadoo taakulo dheeraad ahna looga dalbayo qaadhaan bixiyeyaasha .
Xukuumadda somaliland ayaan wax tallaabo ah ka qaadin falkan budhcadmimada ah ee uu ku kacay shucayb roodhile oo ah mid xaqiijinaya heerka musuqmaasuqu ka gaadhay somaliland,oo noqday midaan waxba laga xishoonayn xattaa gargaarkii lagu caawin lahaa dadkii qarka u saarnaa geeri ama inay gaajo u dhintaan noloshoodu halista ugu jiray in deeqihii loogu talogalay aan la gaadhsiin.
Shucayb ayaa caadaystay boobka hantida qaranka ee aan cidina kula xisaabtamayn,isagoo hore u dhistay guryo badan oo qiimahoodu aad qaali u yahay maadaama aanay dalka ka jirin hanti dhawr shaqadiisa si madax bannaan u gudanaya oo masuul kasta kula xisaabtami kara hantida masuulka looga dhigay.
Waxaan u soo jeedinayaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuq inay dabagal ku sameeyaan wasiirkan oo ah mid dabarka furtay oo dhexda u xidhay lunsiga hantida dadweynaha ee lagu aaminay,taas bedelkeedana ka gaabiyey waxqabadkii loo igmaday.
Xilligii madaxweyne cigaal Ahn xilka hayey ayaa waxa jiray masuul wax qaad qaadi jiray taas oo madaxweyne cigaal u cuntami wayday balse madaxweyne cigaal ayaa masuulkaas u soo bandhigay inuu la yimaado mashruuc wax lagala qabto,isagoo madaxweynuhu masuulkaas ugu maahmaahay siyaasadda lagama taajiree iyadaa wax loo iibiyaa.
Sidaana waxaa sheegay professor maxamed siciid gees oo dhacdadaas goob joog u ahaa.
Waxaana muhiim ah in shucayb roodhile loo sameeyo mashruuc uu hanti ka samaysto,si looga xakameeyo hantida ummadda ee uu ku mamay.
Waxaana la ogyahay inaanu shucayb hore u lahayn wax hanti balse malcaamad quraan yar ku haystay magaaladda gabilay oo noloshiisa ku maarayn jiray balse maanta waa hantiile lacago badani bangiyad
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/08/Diiradda-XeerNews.jpg 161 312 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-06 16:15:582017-09-06 17:22:43Wax ka ogow Halkay martay Deeqo Raashin ahaa Jabuutina ku taakulaysay dadka reer Salal ee Abaarta iyo Dulmigu Naafeeyey.
DAAWO: Itoobiya oo u hanjabtay Xildhibaano ka tirsan BFS Kadib Arrinta Qalb... Daawo Video:Xaaska Sheikh Aadan Sunne Ka Hadashay Weerarkii xalay Odeygeeda...